कति प्रभावकारी र सुरक्षित घरेलु उपचार ? - ज्ञानविज्ञान
घरेलु उपचारले दीर्घकालिन प्रभाव पार्छ । तुलनात्मक रुपमा घरेलु उपचार धेरै सस्तो र सजिलो पनि हुन्छ ।
हामीलाई थाहा छ, एलोपेथिक उपचार भन्दा घरेलु उपचार राम्रो हुन्छ । राम्रो यसकारण कि, यसको कुनै साइट इफेक्ट हुँदैन । तर, यसको अर्को पाटो पनि छ । एलोपेथिक जस्तो घरेलु उपचारको तुरुन्त प्रभाव देखिदैन । यसले बिस्तारै प्रभाव पार्ने हो । कतिपय अवस्थामा हामीलाई यसको मात्रा र प्रयोग विधी पनि थाहा हुँदैन ।
के हो घरेलु् उपचार ?
घरेलु उपचार कसको लागि ?
१. घरेलु उपचारले सुक्षम जीवलाई मार्छ वा त्यसको बृद्धिलाई रोक्छ ।
२. कति सूक्ष जीवलाई जीवित राख्नका लागि अनुकूल वातावरण बन्न दिंदैन ।
– एकै घरेलु उपचारले कति प्रकारका उपचार गर्छ ।
Topics #उपचार #प्रभावकारी
Don't Miss it कुपोषण त छैन, तपाईंको बालबालिकामा ?
Up Next हानिकारक हुनसक्छ यी खानेकुरा पकाए